Show All Most Popular Cutlery Taiwanese Lu Wei Appetizer Fried Platter BBQ Skewers Vegetables BBQ Seafood Rice Special Pot Noodles & Soup Taiwan Signature Dishes Salad Western Main Course Dessert Taiwanese Handmade Drinks Fresh Juice Ready to Cook (Frozen Lu Wei) Ready to Cook (Frozen BBQ Skewers)
Taiwanese Lu Wei
Taiwanese Handmade Drinks
Ready to Cook (Frozen Lu Wei)
Ready to Cook (Frozen BBQ Skewers)
Inside Yangon International Compound, Ahlone Road, Yangon , MM Dagon
R04 Seafood Baked Rice in Cream Sauce (ပင်လယ်စာခရင်မ်ချိစ်ထမင်း)(ပငျလယျစာခရငျမျခြိဈထမငျး)
(10890ks + extra charge packaging 300ks)
D08. Brown Suger Bubble Milk Tea
(3850ks + extra charge packaging 300ks)
C 04 Pork Cutlet(ထိုင်ဝမ်ဝက်သားကတ်သလိပ်)(ထိုငျဝမျဝကျသားကတျသလိပျ)
(4620ks + extra charge packaging 300ks)
R02 Taiwanese Signature Chicken Rice(ထိုင်ဝမ်ကြက်သားထမင်း)(ထိုငျဝမျကွကျသားထမငျး)
(4950ks + extra charge packaging 300ks)
F 04 Fried Fish Tempura with Chilli Sauce (ငါးဖယ်တန်ပူရာကြော်)(ငါးဖယျတနျပူရာကွျော)
(6600ks + extra charge packaging 300ks)
D07. White Gourd Tea with Lemon Juice
(3300ks + extra charge packaging 300ks)
R11 Crsipy Fish Fillet Curry Rice (ဒိုရီငါးကာရီထမင်း)(ဒိုရီငါးကာရီထမငျး)
(9350ks + extra charge packaging 300ks)
A 01 Pork Ears (ဝက်နားရွက်လူဝေ့)(ဝကျနားရှကျလူဝေ့)
A 02 Beef Shank (အမဲသားပြုတ်လူဝေ့)(အမဲသားပွုတျလူဝေ့)
A 03 Beef Tripe (အမဲအူလူဝေ့)(အမဲအူလူဝေ့)
A 04 Chicken Claw (ကြက်ခြေထောက်လူဝေ့)(ကွကျခွထေောကျလူဝေ့)
(2860ks + extra charge packaging 300ks)
A 05 Chicken Gizzard (ကြက်အမြစ်လူဝေ့)(ကွကျအမွဈလူဝေ့)
A 06 Chicken Drumette (ကြက်ပေါင်လူဝေ့)(ကွကျပေါငျလူဝေ့)
A 07 Spiced Quail Egg (ငုံးဥလူဝေ့)(ငုံးဥလူဝေ့)
(2420ks + extra charge packaging 300ks)
A 08 Bean Curd (ထိုင်ဝမ်ပဲပြားလူဝေ့)(ထိုငျဝမျပဲပွားလူဝေ့)
A 09 Strew Egg (ကြက်ဥလူဝေ့)(ကွကျဥလူဝေ့)
(2200ks + extra charge packaging 300ks)
A 10 Assorted Meat Platter (လူဝေ့အစုံဗန်း)(လူဝအေ့စုံဗနျး)
(18480ks + extra charge packaging 300ks)
A 11 Pickle Cucumber (သခွားသီးချဉ်)(သခှားသီးခဉျြ)
A 12 Black Fungus (ကြွက်နားရွက်သုတ်)(ကွှကျနားရှကျသုတျ)
F 01 Cheese Fries (ချိစ်အာလူးကြော်)(ခြိဈအာလူးကွျော)
(6050ks + extra charge packaging 300ks)
F 02 Fried Fillet with Chilli Sauce (ဒိုရီငါးချောင်းကြော်)(ဒိုရီငါးခြောငျးကွျော)
(7150ks + extra charge packaging 300ks)
F 03 Fried Calamari with Tartar Sauce (ပြည်ကြီးငါးကွင်းကြော်)(ပွညျကွီးငါးကှငျးကွျော)
F 05 Crispy Fried Salted Chicken (ထိုင်ဝမ်ကြက်ကြွပ်ကြော်)(ထိုငျဝမျကွကျကွှပျကွျော)
F 06 Assorted Fried Platter (အကြော်စုံဗန်း)(အကွျောစုံဗနျး)
B 01 Pork Belly (ဝက်သုံးထပ်သားကင်)(ဝကျသုံးထပျသားကငျ)
B 02 Black Pepper Beef (အမဲငရုတ်ကောင်းကင်)(အမဲငရုတျကောငျးကငျ)
B 03 Black Pepper Pork(ဝက်ဂုတ်သားငရုတ်ကောင်းကင်)(ဝကျဂုတျသားငရုတျကောငျးကငျ)
B 04 Mongolia Lamb Skewer(သိုးသားကင်)(သိုးသားကငျ)
B 05 Pork Belly Roll Needle Mushroom (အပ်မှိုဝက်သားလိပ်ကင်)(အပျမှိုဝကျသားလိပျကငျ)
B 06 Beef Belly Roll Spring Onion (ကြက်သွန်မြိတ်အမဲသားလိပ်ကင်)(ကွကျသှနျမွိတျအမဲသားလိပျကငျ)
B 07 Beef Belly Roll Needle Mushroom (အပ်မှိုအမဲသားလိပ်ကင်)(အပျမှိုအမဲသားလိပျကငျ)
B 08 Bacon Roll Quail Egg (ငုံးဥဝက်ဘေကွန်လိပ်ကင်)(ငုံးဥဝကျဘကှေနျလိပျကငျ)
B 09 Bacon Roll Needle Mushroom (အပ်မှိုဝက်ဘေကွန်လိပ်ကင်)(အပျမှိုဝကျဘကှေနျလိပျကငျ)
B 10 Bacon Roll Pineapple (နာနာတ်သီးဘေကွန်လိပ်ကင်)(နာနာတျသီးဘကှေနျလိပျကငျ)
B 11 Bacon Roll Asparagus (ကညွတ်ဘေကွန်လိပ်ကင်)(ကညှတျဘကှေနျလိပျကငျ)
B 12 Chicken With Vegetable (ကြက်အသီးအရွက်ကင်)(ကွကျအသီးအရှကျကငျ)
B 13 Crispy Chicken Skin (ကြက်အရေခွံကြွပ်ကင်)(ကွကျအရခှေံကွှပျကငျ)
B 14 Boneless Chicken Thighs (အရိုးလွတ်ကြက်ပေါင်ကင်)(အရိုးလှတျကွကျပေါငျကငျ)
B 15 Chicken Wing (ကြက်တောင်ပံကြီးကင်)(ကွကျတောငျပံကွီးကငျ)
B 17 Taiwan Sausage Original(ထိုင်ဝမ်ဝက်အူချောင်းကင်)(ထိုငျဝမျဝကျအူခြောငျးကငျ)
B 18 Mini Chicken Cheese Sausage (မီနီချိစ်ကြက်အူချောင်းကင်)(မီနီခြိဈကွကျအူခြောငျးကငျ)
B 19 Bean Curd (ထိုင်ဝမ်ပဲပြားကင်)(ထိုငျဝမျပဲပွားကငျ)
B 20 Grill Quail Egg (ငုံးဥကင်)(ငုံးဥကငျ)
B 22 Garlic (ကြက်သွန်ဖြူကင်)(ကွကျသှနျဖွူကငျ)
B 23 Sweet Corn (ပြောင်းဖူးကင်)(ပွောငျးဖူးကငျ)
B 24 Grill Ginkgo (နှစ်တစ်ရာသီးကင်)(နှဈတဈရာသီးကငျ)
B 25 Grill Onion Heart (ကြက်သွန်နီကင်)(ကွကျသှနျနီကငျ)
V 01 Needle Mushroom with Garlic Sauce (အပ်မှိုကင်ပေါင်း)(အပျမှိုကငျပေါငျး)
V 02 Broccoli with Garlic Sauce (ပန်းပွင်စိမ်းကင်ပေါင်း)(ပနျးပှငျစိမျးကငျပေါငျး)
V 03 Grill Eggplant with Braised Pork (ဝက်သားခရမ်းသီးမီးဖုတ်)(ဝကျသားခရမျးသီးမီးဖုတျ)
V 07 Spring Onion Fried Egg(ကြက်ဥမွှေကြော်)(ကွကျဥမှကွေျော)
S 02 Grill Scallop (ကမာပဲကြာဇံကင်)(ကမာပဲကွာဇံကငျ)
(4180ks + extra charge packaging 300ks)
S 03 Grill Shishamo (ရှီရှားမိုငါးကင်)(ရှီရှားမိုငါးကငျ)
R01 Taiwanese Signature Pork Rice (ထိုင်ဝမ်ဝက်သားထမင်း)(ထိုငျဝမျဝကျသားထမငျး)
R03 Chicken Baked Rice in Cream Sauce (ကြက်ခရင်မ်ချိစ်ထမင်း)(ကွကျခရငျမျခြိဈထမငျး)
(9790ks + extra charge packaging 300ks)
R05 Mala Chicken Fried Rice(မာလာကြက်သားထမင်းကြော် )(မာလာကွကျသားထမငျးကွျော )
R06 Mala Pork Fried Rice (မာလာဝက်သားထမင်းကြော်)(မာလာဝကျသားထမငျးကွျော)
R07 Mala Seafood Fried Rice(မာလာပင်လယ်စာထမင်းကြော်)(မာလာပငျလယျစာထမငျးကွျော)
R08 Egg Fried Rice (ကြက်ဥထမင်းကြော်)(ကွကျဥထမငျးကွျော)
(4400ks + extra charge packaging 300ks)
R09 Chicken Cutlet Curry Rice(ကြက်သားကတ်သလိတ်ကာရီထမင်း)(ကွကျသားကတျသလိတျကာရီထမငျး)
R10 Pork Cutlet Curry Rice(ဝက်သားကတ်သလိတ်ကာရီထမင်း)(ဝကျသားကတျသလိတျကာရီထမငျး)
R12 Plain Rice (ထမင်းဖြူ)(ထမငျးဖွူ)
(1320ks + extra charge packaging 300ks)
P01 Mala Pot (မာလာအိုး) (မာလာအိုး)
(21780ks + extra charge packaging 300ks)
P02 Mala Xiang Guo (မာလာရှမ်းကော) (မာလာရှမျးကော)
N 01 Taiwan Beef Noodle Soup (ထိုင်ဝမ်အမဲသားဂျုံခေါက်ဆွဲ)(ထိုငျဝမျအမဲသားဂြုံခေါကျဆှဲ)
(7480ks + extra charge packaging 300ks)
N 02 Mala Dry Noodle with Pork(မာလာဂျုံခေါက်ဆွဲသုတ်ဝက်)(မာလာဂြုံခေါကျဆှဲသုတျဝကျ)
(5280ks + extra charge packaging 300ks)
N 02 Mala Dry Noodle with Chicken(မာလာဂျုံခေါက်ဆွဲသုတ်ကြက်)(မာလာဂြုံခေါကျဆှဲသုတျကွကျ)
N 03 Mala Dry Mushroom Noodle with Vegetarian (မာလာမှိုခေါက်ဆွဲသုတ်သတ်သတ်လွတ်)(မာလာမှိုခေါကျဆှဲသုတျသတျသတျလှတျ))
N 04 Noodle Soup with Pork (ဂျုံခေါက်ဆွဲရည်ဝက်)(ဂြုံခေါကျဆှဲရညျဝကျ)
N 04 Noodle Soup with Chicken (ဂျုံခေါက်ဆွဲရည်ကြက်)(ဂြုံခေါကျဆှဲရညျကွကျ)
N 05 Sichuan Style Dory Fish Noodle Soup(စီချွမ်စတိုင် ဒိုရီငါးချဉ်စပ်ဂျုံခေါက်ဆွဲ)(စီခြှမျစတိုငျ ဒိုရီငါးခဉျြစပျဂြုံခေါကျဆှဲ)
N 06 Mr.Cow Stir Fried Korea Instant Noodle (Homemade Sauce) (Mr.Cow ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲကြော်)(Mr.Cow ကိုရီးယားခေါကျဆှဲကွျော)
N 07 Beef Soup (ထိုင်ဝမ်အမဲသားစွတ်ပြုတ်)(ထိုငျဝမျအမဲသားစှတျပွုတျ)
N 08 Sichuan Style Dory Fish Soup(စီချွမ်စတိုင် ဒိုရီငါးချဉ်စပ်ဟင်းရည်)(စီခြှမျစတိုငျ ဒိုရီငါးခဉျြစပျဟငျးရညျ)
N 09 Pork Ribs Noodles Soup(ဝက်နံရိုးဂျုံခေါက်ဆွဲ ရည်)(ဝကျနံရိုးဂြုံခေါကျဆှဲ ရညျ)
C 01 Slow Cook Pork Belly Stew(ထိုင်ဝမ်စတိုင်ဝက်စတူး)(ထိုငျဝမျစတိုငျဝကျစတူး)
(7920ks + extra charge packaging 300ks)
C 02 Three Cup Chicken (ဆန်းပေး ကြက်သားဟင်း)(ဆနျးပေး ကွကျသားဟငျး)
(79200ks + extra charge packaging 300ks)
C 03 Chicken Cutlet(ထိုင်ဝမ်ကြက်သားကတ်သလိပ်)(ထိုငျဝမျကွကျသားကတျသလိပျ)
W 03 Romaine Lattuce Fruit Salad (ရိုမိန်သီးစုံဆလပ်)(ရိုမိနျသီးစုံဆလပျ)
W 01 Beef Steak ( Striploin)(Mr.Cow စတိတ်)(Mr.Cow စတိတျ)
(23980ks + extra charge packaging 300ks)
W 02 Mr.Cow Grill Half Chicken -(Mr.Cow ကြက်ကင်)(Mr.Cow ကွကျကငျ)
(16280ks + extra charge packaging 300ks)
E 03 Mixed Fruit Yogurt (သီးစုံဒိန်ချဉ်)(သီးစုံဒိနျခဉျြ)
D01. Iced Black Tea
(3080ks + extra charge packaging 300ks)
D02. Iced Milk Tea
D03. Iced Lemon Tea
(3520ks + extra charge packaging 300ks)
D04. Iced Plum Tea
D05. Ahma's Sour Plum Juice
D06. White Gourd Tea
J01 Sunkist Juice
J02 Watermelon Juice
J03 Green Apple Carrot Juice
RTE 01 Frozen Pork Ears Lu Wei 100g
Remark - Put one spoon of lu wei water inside the packet
RTE 02 Frozen Beef Shank Lu Wei 100g
RTE 03 Frozen Beef Tripe Lu Wei 100g
RTE 04 Frozen Chicken Claw Lu Wei 3pcs
RTE 05 Frozen Chicken Gizzard Lu Wei 100g
RTE 06 Frozen Chicken Drumette Lu Wei 3pcs
RTE 07 Frozen Spiced Quail Egg Lu Wei 100g (12pcs)
RTE 08 Frozen Bean Curd Lu Wei 100g
RTE 09 Frozen Strew Egg Lu Wei 100g (2pcs)
BBQ01 Pork Belly 250g (5pcs)
Remark - Pepper Power / Chili Powder - 30g provided
BBQ02 Black Pepper Beef 250g (5pcs)
BBQ03 Black Pepper Pork 250g (5pcs)
BBQ04 Mongolia Lamb Skewer250g (5pcs)
BBQ05 Crispy Chicken Skin 250g (5pcs)
BBQ06 Boneless Chicken Thighs 180g (1pcs)
BBQ07 Taiwan Sausage Original 300g (5pcs)
BBQ08 Mini Chicken Sausage 280g (5pcs)